Ikhaya AMAZIKO EMZANTSI E-AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola baseArgentina I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGenius ekhuselayo eyaziwa kakhulu ngeSiteketiso; "Becho". Ibali lethu leMarcos Rojo yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kumntwana wakhe kuze kube ngumhla. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobomi, ubomi bentsapho kunye no-Off-Pitch Marcos Rojo Facts
Ewe, wonke umntu uyazi ngamakhono akhe okuzikhusela kodwa bambalwa baye baqwalasela i-bio yaseMarcos Rojo enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
[Igama elipheleleyo] UFaustino Marcos Alberto Rojo wazalwa ngomhla we-20th ka-Matshi 1990 eLa Plata, eArgentina. Wazalelwa uCarlina Rojo unina noMarcos Rojo uSrr uyise. Wakhula e-El Triunfo eLa Plata, idolophu ehluphekayo i-40 yamamayela ukusuka eBuenos Aires (iNqila yaseArgentina). Siyidolophu eyaziwa ngamagqabha ayo olwaphulo-mthetho kunye nabemi bebhola abanothando.
Ngenjongo yokumenza aphephe umsebenzi wakhe endaweni engekho yolwaphulo-mthetho eLa Plata, abazali bakaMarcos bamthabatha e-Estudiantes LP apho ebhaliswe khona njengomdlali webhola lebhola ebudeni be-4. Ngalansi kwinqanaba elimangalisayo lomkhuseli elithatha amanyathelo akhe okuqala kumdlalo omhle njengomntwana.
Njengoko uMarcos Rojo uthi, ... "Ngeli xesha ndaqalisa ukudlala ibhola, ubaba wayenayo imoto. Wayempofu kwaye uqeqesho lwam aluzange lusondele kakhulu kwindlu yethu. Ngoko kwafuneka sihambe ngebhayisekile. Bobabili sasihamba ngebhayisekile ixesha elide. Ubawo wayethengise ukuthengisa izinto esitalatini kwaye wayeza kubuya kundithabatha ekhaya kwikhambo. Kwakuyindwendwe eninzi kwaye ndiza kufudumala xa eqhuba ibhasilo lakhe! ". URojo kwafuneka ajikeleze uqeqesho, uhambo olujikelezayo lweekhilomitha ze-20 ukusuka ekhaya ukuya kwindawo yokuqeqesha. Wenza imihlatshelo emininzi ukuze aqonde iphupha lakhe lokuba ngumdlali webhola.
"Ndabona umonde wakhe," Uthi uRojo Snr (uyise). "Ndiyakubona kuyo kwaye ndandizibona kuye kuba wayeya kulandela ibhola. Wayehlala ehlukile kwabanye abafana bakhe. " Umdlali we-club (Estudiantes) ongumqeqeshi osemtsha uGabriel San Millan naye wambona amandla kaMarcos kwaye wancedisa ukuphuhlisa italente yakhe kwiklabhu yokuqala yobugcisa. "Ngokwenene, wayengumdlali omhle," uthe iSan Millan. Waqhubeka ..."Wayenezakhono ezilungileyo kunye nesiseko esihle. Kodwa into eyayisoloko imele ngaye yayiyinqwenelo yokwenza njalo. U-Marcos Alonso wokuziphendukela kwemvelo njengomdlali wayengenangqondo. Xa wayeyi18 okanye i-19, waqala ukukhula ngokomzimba.
Ekupheleni kweminyaka yakhe yeshumi elivisayo, uMarcos wayesele edlala kunye nendawo yokuhlala, u-Estudiantes, ohlala kwi-First Division yase-Argentina. Iminyaka engama-10 ubudala kaMarcos yaxhatshazwa ngokulwa kwaye wayeka isikolo ekuqaleni. Kukho ezininzi zokuphanga, ukulwa kunye nokufa. Ibhola ibingumsindisi wakhe. Wayesoloko ebhola ibhola kuba wayeyinkwenkwana. Njalo ibhola, imini nobusuku. Uninzi, amaxesha amaninzi uMarcos uza kulwa. Unomsindo kakhulu kwaye unemibango emininzi kakhulu. Kuqhelekileyo kule zitrato. Kufuneka ube namandla.
Emva kokuwina iCopa Libertadores kwiminyaka yakhe yeshumi elivisayo, uMarcos wathuthela eSpartak yaseMoscow emva koko, i-Sporting Lisbon. Ngokuqinisekileyo wenza uphawu lwakhe kwiiNdebe zeNdebe yeHlabathi ye-2014 eBrazil njengeArgentina yahamba yonke indlela eya ekugqibeleni ngaphambi kokuba ilahlekelwe yiJamani. Oku kukhokelela ekufowuneni UMnited Man. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
URojo utshatile u-Eugenia Lusardo, imodeli yelwimi eyayiseLisbon. Bobabini abathandi babuthana baza bathandana xa uRojo e-Sporting CP. I-Eugenia njengangoku yayisebenza e-Lisbon-based based firmerie ebizwa ngokuthi iDama de Copas. Ngokwenene, inenekazi yobuhle.
Esi sibini sinentombi ebizwa ngokuba yiNkosi (abo babembiza ngothando ngokuthi 'ngakumbi').
Ubomi bukaRojo kunye nentombi ekhohlakeleyo e-Eugenia Lusardo yihlabathi elikude nokukhuliswa kanzima kwe-Argentina.
I-Affair: NgoDisemba 2014, uRojo wayenomdla kunye nomfazi ayedibene naye kwi-nightclub. Wammangalela nge-blackmail kwaye wakhipha isigwebo sokuba amise amaphepha epapasho lakhe egameni. Umyalelo egameni lakhe waphakanyiswa ngo-Apreli 2015 ngenxa yexhala lokuba abanye abadlali bebhola bangasoliswa kwi-affair, kodwa kusekho ukukhusela ukukhutshwa kwemifanekiso ye-Rojo.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
Ibhola lilondoloze uMarcos ebomini kwizitrato ezinzima zase-El Triunfo kwaye uphakamise intsapho yakhe kwintlupheko. Ngezantsi umfanekiso weMarcos noMama wakhe, uCarlina obona mzuzwana omkhulu wobutyebi bakhe nempumelelo.
UMarcos Rojo Snr, owaziwa ngokuba nguTiti ', wayengumdlali odlala umdlalo kunye no-El Cruce kwaye uncedisa ukunyusa unyana wakhe kumdlalo ebusheni. Uyise wakhe wenza i-£ 2.50 kuphela ngosuku nje ngokuba ngumthengisi we-churros ekhoneni lesitalato, okwakumelwe ukwanele ukondla uMarcos kunye nabantakwabo abane-uFranco, noodade abathathu - noNoelia, Micaela, noSol. Ngezantsi umfanekiso weMarcos kunye nabantakwabo abathathu ngeentsuku zabo zobuntwana.
Udumo lukaMarcos Rojo kunye nenhlanhla liye lashiya intsapho yakhe ehlala eyoyika ukubulawa. Izigwenxa zaseArgentina sele zitshitshise uyise kwaye zifaka intloko kumkhwe wakhe. Elinye ilungu leqela legundanqa elaphoyisa ekhaya lakhe lalingumntwana elisongela ukubulala udade wakhe oneminyaka esithoba ubudala uSol no-Godson, oneminyaka elidala.
Babenethemba lokufumana izandla zabo kwezinye zezigidi zeepounds ezihlala zibuyiselwa kubathandekayo bakhe. Oku kwafika xa umvuzo wakhe omkhulu wawunokudityaniswa kwindalo ngumntu omdala waseTrans Trafford. Umntakwabo kaMarcos uFranco noodadewabo uNoelia bakhulume ngesibindi malunga nosapho banoyika ukuba bangamaxhoba kaMarcos kwimpumelelo
Kwi-intanethi ekhethekileyo kunye ne-Sun, baxelele ukuba ukususela ekubeni wajoyina iMan Utd ngo-Agasti, intsapho iyekile ukuphendula umnyango wayo kwaye yenza ukhuseleko. Ethetha ukusuka ekhaya eLa Plata, uNoelia wathi: "Soloko soyika. Zijolise kuthi ngenxa kaMarcos. Bayazi indlu, wonke umntu uyazi. Kufuneka sithathe yonke into yokuqapha kwaye thina
awuphenduli umnyango kunoma ubani. Kwakudingeka sibeke imivalo kwiifestile zethu zonke - phambili, ingemuva kunye neengcango eziphezulu. Kuyingozi ukuba usapho lukaMarcos Rojo. Kodwa asiyi kushiya kuba eli likhaya lethu. " Wayethukuthele kakhulu ngenxa yokuhlaselwa kwamagqirha kunina kunye nendlu kayise ukuba uthumele umfanekiso kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter ebonisa umphumo wokuxhatshazwa. Okwangoku, uMarcos ecaphukile wayefuna ukuba amapolisa afumane izigwenxa-zona
akazange akwenze - kwaye wathatha kwi-Twitter ukugxeka abahlaseli.
Nangona intsapho yakhe isuka ekhaya, ihlala isinye ixhoba
isicwangciso esitsha sokususa imali kubo. Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba xa uMarcos ejoyina u-United ehlobo, le ntsebenzo yayiqhutywe ngenxa yemicimbi yemvume yemisebenzi ebangelwa izigxeko zokuhlaselwa kwidolophu yakubo.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - UkuLawula iimeko zokulahleka
UFranco umntakwabo wathi ...: "Wayesoloko efuna ukuba yiVeron kwaye wayezenza ngathi xa edlala ibhola ebhola. UMarcos uya kuhlala ehleli egumbini lakhe ngeentsuku ngexesha lakhe iqela liye lahlulwa kumdlalo obalulekileyo. Emva kokuba iArgentina ilahlekelwe yiJamani kwi-Final Final Cup ye-2014, uMarcos akayi kuthetha okanye abone umntu malunga neveki. Unokucaphukisa iintsuku ezininzi. Uhlala enomsindo. Ngeli xesha, kufuneka ahlale yodwa aze abuyele ezolile. Emva kweNdebe yeHlabathi, yamthatha malunga neentsuku ezihlanu. Uguqula ifowuni yakhe kwaye akathethi nabani na. Kodwa akuzange kwenzeke eManchester United, kodwa. "
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts - Ingxabano
UMarcos wade wabangela ukuphikisana emva kokuthumela umfanekiso we-drug lord Pablo Escobar kwiphepha lakhe le-Instagram ngamazwi: "Ngubo kuphela abalambileyo kunye nam kwaye bema kum xa ndihamba ngexesha elibi ngexesha elithile ebomini baya kudla etafileni lam."
UMarcos, xa echasene naye, wathi le ndawo yayingenanto enkulu kwaye yathi: "Ndibeka umfanekiso ngenxa yokuba ndiyayithanda le nto kunye namazwi." Peharbs, hUyabona ibali lobomi likaEscobar kwiTV kwaye uthanda amabinzana. A kuthethi. Enyanisweni, uxhasa oko akwenzileyo. Nangona kunjalo, nangona wayephumelele, uMarcos akayilibala iingcambu zakhe kwaye wenza ukuba yonke yakhe intsapho izuze ngempumelelo yakhe.
Oku kwakungeke kwenzeke ukuba wayilandela enye inzondo ebomini 'kucula'. UMarcos wayefuna ukuba ngumculi ukuba akakwazi ukuba ngumdlali webhola. Enyanisweni, Uvuma kwaye udansa kuwo onke amaqela, yonke imicimbi yentsapho.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
UMarcos Rojo unelungelo elilandelayo kubuntu bakhe.
Amandla kaMarcos Rojo: Unemfesane, ubuciko, inembile, inobulumko, isilumko kunye nomculo (iTalente yakhe yokuqala ngaphambi kwebhola).
Ubuthathaka bukaMarcos Rojo: Ukungakwazi ukulawula ilahleko.
Yintoni uMarcos Rojo ayithandayo: Ukuba yedwa, ukulala, umculo, uthando, imidiya ebonakalayo kunye nokubhukuda.
Yintoni uMarcos Rojo ayithandiyo: Abahlali, abagxekwa, abadlulileyo bebuya beza kumnxusa kunye nobugwenxa baluphi na uhlobo.
UMarcos unobungane kakhulu, ngoko bahlala behlala kwiqela labantu abahluke kakhulu. Kananjalo uyazimela kwaye uhlala ekulungele ukunceda abanye, ngaphandle kokufuna ukufumana nto.
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukutya Banana
UMarcos Rojo wanikezela enye yeengongoma eziphambili zeengxoxo zikaManchester United 's Europa League kunye noRostov - ngokutya ibhanana kwinqanaba!
Ibiyi Jose Mourinhoicala eliqhubela phambili kwikota-yokugqibela kwe-2-1 ngokubanzi ngokubulela Juan Mata isiteyhini sesibini. Zombini iisethi zamaFane zashiywe zithe zaza zafika xa uAshley Young ebonakala ehambisa i-Rojo ibhanki ehlanjelwe ukuba adle ngelixa esentsimini.
Jose Mourinho wavuma ukuba into engavamile yavela ngenxa yokukhathala, into ebonakalayo yokudlala indima ekhulayo phakathi kwelo xesha kunye nokuphela kwexesha.
Mourinho utshele BT Sport: "UMarcos wayenxineke kaninzi. Uyazi umzimba wakhe udinga into. Wacela nje ibhanana. Isimo sebhanana asiyinto ehlekisayo nonke, kufuneka sihloniphe imeko yomdlali. "
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -umvambo
I-Rojo ikwazi ukuthetha isiNgesi, ngokutsho kweempawu zakhe zomlenze, ezifunda 'Ukuzidla' kunye 'nozuko'.
Unamanye amaninzi amathambo, kwakhona:
I-Marcos Rojo Ibali leBantwana I-Untold Biography Facts -Ukugqitywa kweRona
kodwa u kugweba leRabona'Ukucima kwiNdebe yeHlabathi ayinalo ithemba elikhulu kunyawo lwakhe lokunene. UMark Lawrenson usikisela ngokucacileyo ukuba "wayeya kukhangela imbongolo" ukuba wayeyidlala.
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iMarcos Rojo Ingane yabantwana kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke izimvo zakho Qhagamshelana nathi!.